Nhau - Kufananidza kwenzira yekugadzira nzira muBOPET Industry
Parizvino, kune maviri akasiyana maitiro ekugadzira nzira muBOPET indasitiri, imwe iri kuita slicing process, imwe iri directly-melting.
Isati yasvika 2013, musika wainyanya kutarisirwa kuita slicing, apo mushure ma 2013, kufudza boka kwakaunzwa. Zvinoenderana nehuwandu hwaZhuo Chuang, mukupera kwaSeptember 2019, huwandu hwekugadzira hweBOPET kuChina hwaive mamirioni mazana matatu nemakumi manonwe, uye huwandu hwekugadzira hwekutungamira kwakanyungudutsa michina yakaverengerwa inosvika makumi matatu muzana yehuwandu hwese hwekugadzira, uye makumi matanhatu asara % yezvesimba rekugadzira raive rekuomesesa midziyo.
Kwete. Yakananga yakanyunguduka mutsara
KugonaOns Matani / gore
Mari yekuita slicing yakadzikira pane iyo yekusungunuka yakananga, inenge mazana mashanu emakumi mashanu yuan patani. Naizvozvo, ine mhindu yakasimba mumunda wefirimu rakajairika. Parizvino, mabhizinesi matatu epamusoro muindastiri ane zvigadzirwa zvemitemo zvina, Jiangsu Xingye, Yingkou Kanghui ndevapi vatengesi vepamusoro muBOPET indasitiri kuChina, uye chikamu chemusika chenguva dzose firimu yakawanda. Nekugadzirwa kweNgobo Jinyuan, Fujian Baihong, Zhejiang Yongsheng naShuyang Genzon kujoinha indasitiri iyi, nzira nyowani yemakwikwi yakaumbwa mumunda weBOPET, asi mukana wemakwikwi wakawanda uri pachena kupfuura nzira yekunyora.
Pane zvese zvakanakira uye zvakashata munzira mbiri idzi. Kunyangwe iwo purofiti yekutungamira yakananga mumunda wefirimu yemhando yepamusoro iri nani, mutsara wekuita slicing une mikana iri pachena maererano nesimba rekugadzira uye hupfumi hwechigadzirwa. Parizvino, BOPET musika mune yakananga yakanyungudutswa giraidhi kugadzira firimu inoonda, kazhinji Thin BOPET mafirimu zvigadzirwa anonyanya kushandiswa mumunda wekutakura wakajairika. Chikamu chete chehukuru hwacho chinogona kushandiswa mumunda wemagetsi. Nekudaro, mutsara wekugadzira weyakanyora muitiro ndeyekusiya mafirimu ekugadzira mutsara. Pamusoro pekupakirwa kwakajairika, inogona kushandiswawo mumunda weaindasitiri emagetsi nemagetsi, minda yekuvaka uye yekushandisa inowanda, uye mapoka evatengi ane simba rakawanda.
Nekusimudzirwa kweBOPET yekugadzira line uye nekuvandudza kwetekinoroji, zvakananga melt michina inogona kuburitsa zvimwe zvigadzirwa pasi pekutarisirwa kwekuderedzwa kwemutengo. Muna 2005, kuburikidza nekusimudzira kwetekinoroji, Fujian Baihong inogona kuwedzera ukobvu hwekugadzira kubva 75μ kusvika 125μ. Midziyo mitsva ichiri kurongwa kuzotevera. Panguva iyoyo, ichakwanisa kuburitsa zvigadzirwa nehupamhi hwe250μ uye 300μ. Iri idanho rekushanduka-shanduka muzvishandiso. Pamusoro pezvo, BOPET yekugadzira mutsara yakawanawo budiriro yeapfrog maererano nehupamhi: Kubva pa2,2 mita kusvika 8.7 metres kusvika 10.4 metres. China BOPET yemusika chikamu chechirongwa chanopera musi wa 3-15 weiyo 10.4 m yekugadzira mutsetse, uyo unozorodza chimiro chitsva cheChina cheBOPET indasitiri.